Miyuu laacibka khadka dhexe ee kooxda Chelsea, N’Golo Kante seegayaa Final-ka Europa League? – Gool FM
(London) 26 Maajo 2019. Laacibka khadka dhexe ee kooxda Chelsea, N’Golo Kante ayaa la soo warinayaa inuu shaki weyn ku jiro ciyaaristiisa kulanka Final-ka Europa League oo ay Arbacada la leeyihiin Arsenal, isagoo la dhibtoonaya dhaawac jilibka ah.
Kante ayaa seegay kulammadii lagu soo xirayey xilli ciyaareedka horyaalka Premier League sababo dhaawac kubka ah, laakiin xiddiga xulka qaranka France ayaa dib ugu soo laabtay tababarka.
Markale ayaana la sheegayaa inuu ku dhaawacmay tababarka ay kooxdiisa Blues isugu diyaarinayso kulanka Gunners, waxaana ay u badan tahay inuu seegi doono kulanka Final-ka Europa League.
Jariiradda The Mirror ayaa warinaysa in Kante ay haatan u badan tahay inuu seegi doono kulanka Final-ka Europa League oo ay la leeyihiin Arsenal, kaddib markii uu dhaawac ka gaaray Jilibka Sabtidii.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Kante uu weli u baahan yahay in la qiimeeyo maalmaha soo aaddan, laakiin waxa ay u muuqataa in macallin Maurizio Sarri ay taam u noqon doonaan kaliya saddex ciyaaryahan oo khadka dhexe ah.
Ruben Loftus-Cheek ayaa horay garoomada uga maqnaa kaddib qalliin lagu sameeyey, taasoo la micno ah in Jorginho, Mateo Kovacic iyo Ross Barkley ay ku soo bilaaban doonaan kulanka Chelsea ay wajahayso kooxda ay ku xafiiltamaan Magaalada London ee Arsenal.
Juventus oo jawaab rasmi ah ka bixisay wararka ku saabsan inay xiriir la sameeyeen Pep Guardiola